Sarkaal Xaaskiisa dilay oo la xukumay | Shabakadda Garsoor
Home Maxkamadda Ciidanka Sarkaal Xaaskiisa dilay oo la xukumay
Sarkaal Xaaskiisa dilay oo la xukumay
Muqdisho (Garsoor)- Xidigle NISA Maxamed Cabdiraxmaan Cali ayaa loo heystaa dilka Marxuumad Sacdiyo Khaliif Faarax oo aheyd Xaaskiisii hore, dilkaas oo ka dhacay degmada Yaaqshiid taariikhdu markey aheyd 19-12 sanadkii tegay.
Xidigle NISA Maxamed Cabdiraxmaan Cali iyo Marxuumad Sacdiyo Khaliif Faarax ayaa horey u ahaa qoys balse mar dambe ayay kala tageen, wixii xilligaas ka dambeeyay ayay u baxday dhankaas Doolow oo u deganaa eheladeeda.
Xafiiska Xeer-Ilaalinta ayaa hor keenay fadhiga Maxkamadda Qiraalka eedeysanah, markaatiyaal sedax shaqsi ah oo goob joog u ahaa dhacdada, Sawirka Marxuumka, Warqadda Dhakhtarka ee cadeyneysa dhimashada.
Qareenada u doodayay eedeysnayaha ayaa weydiistay Garsoor in loo naxariisto eedeysanaha maadaama uu jiray rabitaan uu u qabay xaaskiisii hore.
Previous articleMaxkamadda Ciidamada oo xukuntay Maxamed Cabdiraxmaan Ibraahim
Next articleAskar dhac iyo dil geysatay oo la xukumay.